UD: oo talo ku bixisay in laga gaabsado safarrada loo aado dalka Masar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
UD: oo talo ku bixisay in laga gaabsado safarrada loo aado dalka Masar
La daabacay fredag 16 augusti 2013 kl 10.41
Wasaaradda arrimmaha dibadda ee dalkan Iswiidhen ayaa soo saartay galab-nimadii maalintii khamiista talo la xiriirta safarrada loogu ambabaxo dalka Masar, iyadoona ay wasaaraddu uga digtay in dhammaan muwaadiniinta iswiidhishka ee dal-xiiska ugu sugan ey isaga soo baqoolaan dalkaasi, isla-markaana kuwooda safarka ugu talo jireyna ey ka baaqsadaan safarradooda.
Wixii taladan ka horeeyay ayay howlwadeennada wasaaraddu uga digeen safarrada aan aan laga baaqsan karin, iyadoona kuwaa horay looga reebey tuulooyinka dalxiiseyaasha ee xeebaha badda cas iyo garoommada caalamiga e la isaga goosho ee magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar.
Talada ay wasaaraddu ka bixisay safarrada loo aado dalka Masar ayaa socon doonta inta war dambe midkaa ka duwan ay wasaaraddu soo saari doonto. Iyo sidoo kale in laga gaabsado isaga gooshka garoonta diyaaradda.
Wasaaradda ayaa sidoo kale boggeeda internet-ka ku xustay in muwaadiniinta iswiidhishka ee dalkaasi ku sugan ey dhegaha kala socdaan xaaladda dalka iyo iney la socdaan wararka wasaaradda arrimmaha dibadda iyo talooyinka ey siineyso muwaadiniinteeda. Sidoo kale in laga gaabsado goobaha bannaan-baxyada lagu dhigeyo. Wasaaradda ayaa intaa raacisay inay dhici karto in xaaladda ammaan ee dalkaasi si dhakhsi ah isu bedeli karto.